🥇 ▷ WoW Classic: fasalka ugu wanaagsan ee taangiga lagu isticmaalo godka iyo baararka ✅
Noocyada Dunida Dagaal-Gaarka ah Classics-ka waxaa loo qaybin karaa saddex kaalmood: taangiyada, daawayaasha iyo kuwa wax iibiya. Si kastaba ha noqotee, fasallo kaladuwan ayaa ku wanaagsan doorar kaladuwan Taangiyada noocee ah ayaa ugufiican?
Taangiyada waa qeyb muhiim ah oo ka socda qol kasta ama koox weerar ‘WoW’ ah oo caadi ah, waxay nuugaan waxyeelada ka soo gaarta xafladda waxayna ka dhigaan cadawgooda inay diiradda saaraan naftooda si ay ugu oggolaadaan xubnaha kale ee kooxda inay shaqadooda si fudud u qabtaan.
Iyaga la’aantood, kooxdu ma shaqeyn karto. iyo, guud ahaan, sida ugu wanaagsan ee haanta, waxyaabaha jilicsan ayaa noqon doona. Marka, si lagaaga caawiyo safarkaaga, halkan waa liis gareeya taangiyadayada WoW Classic ee ugu fiican.
1. Dagaal yahanada
Kahortagga dagaalyahannada ficil ahaan (BLIZZARD INTERTAINMENT)
Ilaalinta Dagaal-yahanada ayaa ah tan ugu wanaagsan WoW Classic, iyo ciyaartooyda qaarkood xitaa waxay u tixgeliyaan inay yihiin tan kaliya ee dhabta ah, sababtoo ah waa fasalka kaliya ee awood u leh inay yareeyaan waxyeelada ay soo gaaraan.
Doorka haanta waa ka dibna cadowga ayaa weeraraya Oo ay sii noolaan. Saddexda nooc ee taangiyada ah, Warriors-ka ayaa ugu wanaagsan arrintan marka loo eego arsenal weyn oo xirfadooda ah sida Shield Wall, taageerada ugu dambeysa iyo jees jeeska ah.
Askartu way sii noolaan karaan waxayna ka dhigi karaan cadaawayaashooda in ay weerari karaan wax ka badan casharrada kale, markaa hel # booska 1 booyadaha taangiyada.
Dheecaannada duurjoogta ah waxay noqdaan orsooyin xoog leh markay baxaan. (XUQUUQDA AADANAHA)
Dheecaannada duurjoogta ah ayaa ah haanta labaad ee ugu wanaagsan ciyaarta.. Tani waxay ahayd sababta oo ah ma aysan yareyn waxyeello ku gaartey codsigii dagaalyahannada, laakiin weli way ka dhigi karaan cadaawayaashooda inay weeraraan oo ay yareeyaan qaddarka burburka ee fiicnaa maxaa yeelay waxay haysteen hub aad u tiro badan.
Sidoo kale bixi utility wanaagsan maxaa yeelay waxay yareyn karaan hubka cadowga iyada oo loo marayo Fairy Dabka waxayna kordhin karaan fursadaha weerarka halista ah ee xulufada oo ay ugu mahadsan tahay kartidiisa.
Cirku waa badanaa loo adeegsado kooxaha weerarada sidii “haanta ka baxsan”: haanta labaad oo baabi’isa cadaadiska “haanta weyn”, taas oo guud ahaan dagaalyahan u ah halista ugu weyn.
3. Ilaalinta Paladin
Ilaalinta Paladin waxay isticmaashaa sixir xurmo leh si ay taangiyada u samayso. (XUQUUQDA AADANAHA)
Ilaalinta Paladin waa tan ugu dambeysa uguna xun liiska. Badanaa, looma isticmaalo taangiyada sababtoo ah ma leh hoos u dhac joogto ah oo waxyeello ah iyo dariiqooyin lagu qasbo daayeerka si ay u weeraraan sida Druids iyo Warrior Slap, kuwaas oo inta badan muhiim u ah taangiyada.
Waxaa loo isticmaali karaa haamaha dhulka hoostiisa mara, sababta oo ah waxay leeyihiin hab wanaagsan oo ay ku xakameeyaan kooxaha daanyeerka waxayna ku bixiyaan utility waxtar leh barakotooda, laakiin waxay u baahan yihiin waayo-aragnimo iyo awood ay sidaa ku sameeyaan, hal qalad oo keliya ayaa macnaheedu noqon karaa geeri kooxda oo dhan.
Dhanka kale, askarta iyo kuwa nabaad-guurku waa kuwa aad u jilicsan oo waxay leeyihiin qalab lagu badbaadiyo dagaallad taxaddar la’aan ah.
Tani waa haanta ugu wanaagsan WoW Classic. Dagaalyahanadu waa sharaftaada ugufiican dhamaan waxyaabaha kooxdu ka kooban tahay, halka druids iyo paladins ay noqon karaan badal wanaagsan, qaasatan qolka shan-qof. Haddii aad rabto inaad la kulanto weerarada ugu culus sida xudunta dareeraha iyo darbiga Onyxia, waxaad si fiican u soo qaadan kartaa haanta Guerrero.